Sidee bay u ekaan kartaa wada shaqaynta ka dhaxeysa iskuulka iyo guriga?
Takk Habka dheeraadka loogu talogalay luqad dhameestirka isgaarsiinta – qoraal ku saabsan luqadaha badan iyo AKK
Aqoonta luqado badan
Afka hooyo oo sii jiraya
AKK afka hooyo sidee?
AKK afka hooyo, waayo?
Luqadaha badan si wadajir ayaan u wada dhisnaa!
Su´aal iyo jawaaba
Wada shaqaynta ka dhaxaysa guriga, iskuulka iyo macallimiinta afka hooyo waa xaalad muhiim u ah horumarka luqada ee caruurta, si loo horumariyo luqada waa in aad aqoon uleedahay, rabitaan niyad iyo wax ku oolnimo. Dadka hareerahaada ah ayaa micno wayn ku leh si loo horeumariyo dhamaan luqada caruurta wadada loo mari lahaa waxaa ku firi kartaa waxyaabaha soo socda.
Dhamaaan AKK oo la adeegsado bayáda iskuulka waa lala adeegsan karaa afka hooyo. Afka hooyo macalimiintiisa waxa uu ubaahan yihiin in ay heestaan qalab – AKK iyo aqoon sida waxan loo adeegsan karaa.
Waxaa aasaasi ah in ay kamid ahaato saacadaha afka hooyo in ay qorsheeyaan si wadajir ah macalinka gaar ah ee ardayga iskuulkiisa iyo macalinka afka hooyo. Habkaas ayaa la awoodi karaa in mowduuca markaas ka jira iskuulka lagu xoojin karaa ayadoo afka hooyo barashadiisa.
Waalidiinta aad bay u og yihiin caruurta aqoontooda luqad ee afka hooy. Waa in la waydiiyaa iyo in lagu dhiirogaliyaa in gacan ka geestaa suaalooyin muhiim ah ama dhacdooyin caruurta noloshooda oo hodan kaga dhigaya waxbarashada afka hooyo.
Soo jeedinaya qodob isgarisiin